Isizwe esiyiSiqithi kuphela esingenaCoronavirus siya kuhlala sivaliwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziPhuliweyo zaseCook Islands » Isizwe esiyiSiqithi kuphela esingenaCoronavirus siya kuhlala sivaliwe
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziPhuliweyo zaseCook Islands • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba eziNtsha zaseNew Zealand • iindaba • abantu • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ngokukhawuleza emva kokufika eRarotonga unokuba uhamba nge-kayaking kwi-lagoon ecacileyo, ucoce kwi-cocktail yakho yokuqala okanye ulwandle olupholileyo kwindawo yakho enhle. Nokuba uphi okanye ufuna ukwenza ntoni, iziqithi zezakho ukuba uzonwabele xa ukhululekile.
Ewe oku kunokwenzeka ukuba ungafika apho
The Isiqithi saseKhuk Ayizukuvula kwakhona ukuhamba, kubandakanya eyiphi eyona ntengiso yayo eNew Zealand de kungabikho kugqithiselwa koluntu kwiCovid-19 kangangeentsuku ezili-14 kwaye abahambi ngaphezulu kwe-12 bagonywe ngokupheleleyo
Imida yeCook Islands ivaliwe eNew Zealand kwaye uninzi lwamanye amazwe ngaphezulu kweeveki ezintathu okokoko ityala lokuqala le-Delta laxelwa okokuqala ngo-Agasti 16 e-Auckland.
Iziqithi ze-Cook luhlanga oluseMzantsi Pacific, kunye nezopolitiko kunye neNew Zealand. Iziqithi zayo ezili-15 zisasazeke kwindawo enkulu. Esona siqithi sikhulu, iRarotonga, likhaya leentaba ezixineneyo kunye neAvarua, ikomkhulu lelizwe. Ngasemantla, iAitutaki Island inechweba elikhulu elingqongwe ziingqaqa zekorale neziqithana ezincinane ezinesanti. Eli lizwe lidume kwiindawo zalo zokuntywila emanzini.
Urhulumente wase-Cook Islands uvale ngokukhawuleza ukuhamba, evumela ii-Kiwis kwii-Cook Islands ukuba zibuye.
Inkulumbuso yase Cook Islands u-Brown wathi ngamanye amaxesha kwixesha elizayo, onke amazwe kuyakufuneka aphile no Covid-19. Nangona kunjalo, elo xesha lalingelilo ngoku kubantu baseCook Island, njengoko bejonga ngononophelo uqhambuko kunye neenkqubo zokugonya zeDelta yaseNew Zealand.
Iziqithi ze-Cook lelinye lawona mazwe ambalwa ehlabathini athe akwazi ukugcina iCovid-19 ngaphandle.
In USeptemba Cook Islands wenza isithembiso sokuhlala eCoronafree.
UBrown uthe kumajelo eendaba aseNew Zealand: "Ngelixa sivuma ukuba kwixesha elizayo onke amazwe kuyakufuneka afunde ukuhlala neCovid-19, alikafiki elo xesha."
Uyenze yacaca gca iCook Islands ukuba ayifuni kuqhambuko lwe-COVID. Wongeze ngelithi, ifuthe kubutyebi bezempilo boBukumkani kunye noqoqosho luza kuba lusizi.
UBrown uthe urhulumente wakhe wenza konke okusemandleni ukukhusela impilo nentlalontle yabantu baseCook Island kunye noqoqosho lweli.
Ngaphezulu kwama-300 abantu baseCook Island abakwimeko eNew Zealand kuya kufuneka balinde de kube ngoLwesibini olandelayo ukufumanisa ukuba bangabuyela na ekhaya.
UBrown uthe urhulumente wakhe ujonge ukubuyisa inqwelomoya ukusuka eChristchurch kwabo bangaphandle kweAuckland kwinqanaba le-2, kodwa akukabikho mihla ibekiweyo.
Abo bahambi baya kudinga ukubonelela ngovavanyo olubi lwe-Covid-19 iiyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba, bagcwalise ifom yesicelo sokubuyisa i-Cook Islands kwaye benze isinyanzelo seentsuku ezisixhenxe xa befika kwikomkhulu lesizwe iRarotonga.
UBrown uthe ngenxa yomngcipheko weCovid-19, abemi baseCook Island eAuckland kuye kwafuneka balinde ukwehla ukuya kwinqanaba 2 okanye ngaphantsi ngaphambi kokuba bavunyelwe ukubamba inqwelo moya egodukayo.
IKhabinethi yakhe iza kuqhubeka ukuphonononga ulwazi kunye neengcebiso ezivela kumagunya ayo ezempilo xa amanani okugonya esonyuka eNew Zealand.
Impembelelo yobhubhane kukhenketho lweCook Islands kunye noqoqosho lwayo belubalulekile, kwaye uqhambuko eNew Zealand luphazamise ukukhula.
Inkxaso mali ye- $ 15 yezigidi icwangciselwe inkxaso eyongezelelweyo kumashishini aseCook Islands ukusuka kuhlahlo-lwabiwo mali lukaJuni.
Inkxaso yemivuzo iya kuqhubeka ngoSeptemba kwaye izibonelelo zeshishini, kubandakanya izibonelelo zabarhwebi kuphela, ziya kubuyiselwa ngo-Okthobha.
“Siyazi ukuba intengiso yethu yezokhenketho yomelele kwaye noqoqosho lwethu. Siyibonile indlela ukhenketho olukhawuleze ngayo ukubuyela ngoMeyi, kwaye iyakuphinda yenzeke ”, utshilo uBrown kwintambo yeendaba yaseNew Zealand.